International Industrial Technology & Machinery Show - Myanmar Automobile and Equipment Directory
International Industrial Technology & Machinery Show
စက်မှုနှင့် နည်းပညာကဏ္ဍ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းလာစေရန်ရည်ရွယ်၍ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ ကြီးမှူးပြီး Myanmar Promotional Services Co.,Ltd မှ စီစဉ်ကျင်းပလျက်ရှိသည့် ဆဌမအကြိမ်မြောက် “International Industrial Technology & Machinery Show” 2019 Yangon ပွဲကြီးကို ရန်ကုန်မြို့တပ်မတော်ခန်းမတွင် ဇန်နဝါရီလ (၂၇ ) မှ (၂၉ )ရက် အထိ နံနက် ၉နာရီမှ ညနေ ၅နာရီအတွင်း (၃) ရက်တိုင်တိုင် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဤပြပွဲကြီးတွင် နိုင်ငံတကာမှ နည်းပညာနှင့်စက်မှုကုမ္ပဏီကြီးများမှ ထုတ်ကုန်များနှင့်အတူ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏ လက်အောက်မှဌာနများဖြစ်သော DIC, DISI, အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း ၁, ၂, ၃ နှင့် မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်းများမှ ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းများနှင့်နည်းပညာများကို ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ပြည်သူများမှ ပိုမိုသိရှိနားလည်နိုင်စေရန်နှင့် လေ့လာဝယ်ယူနိုင်စေရန်ရည်ရွယ်၍ ကုမ္ပဏီစုစုပေါင်း (၅၀)ကျော်မှ အခန်းပေါင်း (၁၀၀)ကျော်ဖြင့် ခင်းကျင်းပြသသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
(၁) စက်မှုနည်းပညာတီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဗဟုသုတများ၊ SMEနှင့် ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများကို တာဝန်ရှိသူများနှင့် သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်များမှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှ ကဏ္ဍအလိုက် Knowledge Sharing ပြုလုပ်သည့် Seminars များ၊
(၂) အနာဂါတ်လူငယ်များ၏ စက်မှုပညာ၊ နည်းပညာနှင့် တီထွင်ဖန်တီးနိုင်မှုစွမ်းရည်များကို ဖော်ထုတ်မြေတောင်မြှောက်ပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်သည့် စက်မှုနည်းပညာတီထွင်ဖန်တီးမှုစွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲ (Inventor Award Competition) “ကနောင်ဆု” ပြိုင်ပွဲများ ထည့်သွင်းကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
(၃) ထို့အပြင် ပြပွဲသို့လာရောက်လေ့လာကြည့်ရှုကြသူများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ Facebook စာမျက်နှာများတွင် ပြပွဲသို့တက်ရောက်ကြောင်း Check In ဝင်ရုံဖြင့် Lucky Draw များကိုလည်း ပါဝင်ကံစမ်းနိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့် အားလုံးပဲ လာရောက်ကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်ရှင်……..
ပြပွဲသို့လာရောက်လေ့လာကြည့်ရှုသူများ အနေဖြင့် စက်မှုနည်းပညာဟောပြောပွဲများမှ နောက်ဆုံးပေါ်စက်မှုနည်းပညာများ၊ ကုန်ပစ္စည်းများကို လေ့လာနိုင်မည့်အပြင် SMEနှင့်ပတ်သက်သော ဗဟုသုတများကို သိရှိနားလည်၍ မိမိတို့လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သော အထောက်အပံ့များကိုလည်း ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Inventor Award Competition မှ ဆန်းသစ်သော နည်းပညာအသစ်များကိုလည်း လေ့လာသိရှိနိုင်ပြီး မိမိတို့အတွက် ပြန်လည်အသုံးချနိုင်မည့်အခွင့်အရေးများကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Lucky Draw အစီအစဉ်အနေဖြင့်…..
(၁) ပထမဦးစွာ မိမိတို့၏ Facebook Pageတွင် ပြပွဲသို့ လာရောက်လေ့လာကြည့်ရှုကြောင်း Check Inဝင်ရပါမည်။
(၂) ဒုတိယအနေဖြင့် Check-In ဝင်ထားသည့် Postအား Screen Shootရိုက်၍ ပြပွဲအတွင်းရှိ Myanmar Promotional Services Co.,Ltd (MPS) ၏ Service Counterတွင် လာရောက်ပြသကာ Code နံပါတ်များကို ထုတ်ယူပြီး မိမိတို့၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ (အမည်၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်နှင့် ဖုန်းနံပါတ်) တို့ကိုဖြည့်စွက်ကာ Lucky Draw Boxထဲသို့ထည့်သွင်းကံစမ်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။
(၃) တတိယအနေဖြင့် ကံထူးသူများကို ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကံထူးရှင်များမှ မိမိတို့ဖြည့်သွင်းခဲ့သော ကုဒ်နံပါတ်နှင့်တကွ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ (အမည်၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်နှင့် ဖုန်းနံပါတ်) ကို MPS၏ Viber နံပါတ် (+959954093984) သို့ ဓါတ်ပုံရိုက်၍ ပေးပို့ရမည်ဖြစ်ပြီး အချက်အလက်များမှန်ကန်ပါက ဆုကြေးများထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
*Lucky Draw အစီအစဉ်များကို ပြပွဲကာလ ၃ရက်လုံးထည့်သွင်းပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် မည်သူမဆို ဝင်ရောက်ကံစမ်းသွားဖို့လည်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်ရှင်…..
Main Sponsor အဖြစ် - Suzuki Myanmar Motor Co.,Ltd
Gold Sponsors များအဖြစ် -
- Repassa Singapore PTE LTD
- International KLM Ltd (Hyundai Motor Myanmar)
- Sea Lion Group Co.,Ltd
- Asia Green Development Bank Ltd. (AGD Bank)
- CB Bank တို့မှ အဓိကပံ့ပိုးကူညီပေးထားပြီး
အခြား company များအနေဖြင့် -
- Shwe Lunn Pyan Co.,Ltd.
- Supermaly Power Co.,Ltd.
- Frontiir (Myanmar Net)
- Trino Tech Co.,Ltd.
- Mast Myanmar Technology Co.,Ltd.
- Myanmar Sheet Metal Co.,Ltd.
- Myanmar General Motor Co.,Ltd.
- Kaba Kyaw Co.,Ltd.
- Myanmar Shwe Ou Daung Minn & NRT Myanmar Co.,Ltd.
- Sky Mahar Co.,Ltd.
- Myanmar Mahar Htun Co.,Ltd.
- Proven Co.,Ltd.
- 2K Tech Engineering Co.,Ltd.
- Global Technology Co.,Ltd. (5BB)
- Next Tire International Co.,Ltd.
- Hitachi Soe Electric & Machinery Co.,Ltd.
- Hitachi Elevator Co.,Ltd.
- ATP Solution & Innovation Co.,Ltd
- Ve Ve Soft Drink
- Techno Engineering & Associates Co.,Ltd.
- Myanmar GT Broadband Co.,Ltd.
- Dream Media Trading Co.,Ltd.
- Dae Ryun Asia Co.,Ltd.
- Nanova Co.,Ltd.
- Saibeacon Trading Co.,Ltd.
- Dagon AMT Co.,Ltd
- Datkhina Dipar Media Partner
- Greenergy (Thailand) Co.,Ltd
- Summit Multichem Myanmar Co.,Ltd
- Myanmar Billiance Auto Co.,Ltd
- DAEWOO BUS MYANMAR CO.,LTD
- www.mycar.com.mm တို့နှင့်အတူ အခြား company များတို့မှ ပါဝင်ပြသသွားမည် ဖြစ်ပါတယ် ။
ယခု (၆) ကြိမ်မြောက် International Industrial Technology & Machinery Show 2019 ပြပွဲကြီးမှာဝင်ရောက်ပြသလိုသောလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့်အောက်ပါအတိုင်းဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Official Media partner များအဖြစ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုသော သတင်းမီဒီယာများကိုလဲ ဖိတ်ခေါ်ကြိုဆိုပါတယ်။
??Myanmar Promotional Services Co.,Ltd
☎️ 01- 513903
Website ~ www.mps.com.mm
Office Address-No.(22/24),Corner of Shin Saw Pu & Baho Road , Ahlone Township, Yangon.